Iyini i-freelance | Ezezimali Zomnotho
I-Encarni Arcoya | | Umsebenzi
Impela uke walizwa leli gama izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ezizimele. Eqinisweni, singasho ukuthi kuyimfashini njengamanje nokuthi igama layo ngeSpanishi lizimele (yize kukhona ochwepheshe abathile abanikeza umehluko phakathi kokubili).
Kodwa, Yini i-freelancer? Iziphi izici enazo? Ihluke kanjani ku-freelancer? Uma ufuna ukusebenza njenge-freelancer, lapha uzothola konke odinga ukukwazi ngaphambi kwanoma yini enye.
1 Kuyini ukuzimela
1.1 Umehluko phakathi kwe-freelance kanye ne-freelance
2 Izici ze-freelancer
3 Kudingekani ukuba yi-freelancer?
3.2 Impahla yakho yokusebenza
3.3 Yiba namakhasimende
4 Ungawutholaphi umsebenzi
Into yokuqala esizoyenza ukuthi uqonde ngokugcwele ukuthi leli gama lisho ukuthini. I-freelancer i-a umuntu osebenza ku-akhawunti yakhe, okungukuthi, ngokuzimela. Ihlinzeka ngezinsizakalo zayo kwabanye abantu noma izinkampani, okungukuthi, isebenzela abantu besithathu abacela umsebenzi wayo.
Njengoba bengebona abenkampani, futhi bengasebenzi enkampanini, kodwa kunalokho bazenzela ngokuzimela (ngokwabo, benikela ngomsebenzi wabo kwabanye), kufanele bazikhokhele izindleko ngokwabo. Okungukuthi, amaholide, ilivu yokugula, umshwalense, izintela, njll., yonke into ngezindleko zakho.
Umehluko phakathi kwe-freelance kanye ne-freelance
Njengoba sakutshela ngaphambili, ababhali abaningi basungula uchungechunge lomehluko phakathi kwe-freelancer kanye ne-freelancer. Kodwa yini ebenza babukeke njengezibalo ezimbili ezihlukene?
Ngakolunye uhlangothi, kuthiwa Ama-freelancers asebenza emisebenzini eyenzeka ngezikhathi ezithile eneholo elithile kanye nesikhathi esinqunyiwe. Okusho ukuthi, baqashelwe insizakalo ethile futhi, uma lokhu sekwenziwe, ubudlelwano buyaphela. Ngakolunye uhlangothi, kubantu abazisebenzayo imisebenzi izoba ngeyomsebenzi noma yebhizinisi, yesikhathi esinqunyiwe kanye nemali engenayo eguquguqukayo. Iqiniso liwukuthi bonke abazimele ngesikhathi esithile banemisebenzi yokuzimela futhi ehlala isikhathi eside; futhi kungenzeka okufanayo nakumuntu ozisebenzelayo.
Omunye umehluko yilokho Abasebenzi abazimele abadingeki ukuthi babhalisele i-RETA (Isimiso Sabasebenzi Abaziqashayo), kodwa yebo ku-IAE (Intela Yemisebenzi Yezomnotho). Kungani? Hhayi-ke, ngoba uma umsebenzi wakho ungafinyeleli emholweni omncane womsebenzi, akudingeki ukuthi udlule ku-Social Security. Kunjalo, uma usufikile kuyisidingo esiyimpoqo uma ungafuni ukuthi i-Hacienda ingqongqoze emnyango wakho.
Ngokusekelwe kukho konke okungenhla, sithola ukuthi i-freelancer ngumuntu:
I-Autónoma, okusho ukuthi uyazisebenza. Lokhu kusho ukuthi uyena onqumayo isikhathi azosebenza ngaso, izinsuku azosebenza kuzo nokuthi usuka kuphi (kungaba ikhaya lakhe, indawo aphumule kuyo, ihhovisi, njll.)
Ungumphathi wakhe, ngoba uhlela usuku lwakhe lokusebenza futhi anqume amahora azosebenza, ukuthi uzowenza nini, uzoluphatha kanjani, njll.
Inakekela eyakho imali, noma udlulisele lokhu komunye umuntu, kodwa kufanele ukhokhe izindleko zakho, izintela, umshwalense ...
Ungakhetha amaklayenti akho. Futhi ashiye ongamthandi. Kuqala kuyinto engacabangeki kodwa uma usunozinzo ikakhulukazi udumo luyakhula kuba lula kakhulu ngoba uyazi ukuthi kuzofika elinye iklayenti.
Zibekele amanani akho. Yiqiniso, konke kuzoxhomeka emakethe, umncintiswano, njll. okuyilokho isikali esinganquma.
Kudingekani ukuba yi-freelancer?
Umsebenzi ozisebenzelayo, noma umsebenzi ozisebenzelayo, akuyona into eboshwe ohlotsheni oluthile lomsebenzi. Eqinisweni, ziyanda imikhakha lapho lolu hlobo lwabasebenzi ludlangile. Nokho, kuyiqiniso lokho Imikhakha yezinhlelo, idizayini yezithombe, idizayini yewebhu, ukuhumusha, Umphathi Womphakathi, ukuthwebula izithombe, amakilasi azimele, inhlangano yomcimbi, ukumaketha okuqukethwe ... yilapho kugxilwe khona kakhulu. Noma kunjalo, baningi abengeziwe.
Kodwa, ingabe kuyadingeka ukuhlangabezana nochungechunge lwezidingo ukuze ube ngokuzimela? Iqiniso liwukuthi yebo. Okucacile:
Sikhuluma ngomsebenzi lapho ubambe isandla esisodwa ngaphambili nesinye ngemuva. Awunaso isiqinisekiso noma umshwalense wokuthi amakhasimende akho ngeke akushiye (noma ukuthi uzoze uthole amaklayenti). Ngakho-ke izindleko zingadla imali oyongile futhi, uma engekho amaklayenti, ayikho imali.
Ngenxa yalesi sizathu, kufanele ugcine ikhanda lakho ligxile kakhulu kuphrojekthi ukuze uyenze, unikeze amahora amaningi ukuthi izalwe futhi uthathe izinyathelo zayo zokuqala. Futhi leyo akuyona nje indaba yamahora, izinsuku, amasonto, noma izinyanga. Yindaba yeminyaka.
Impahla yakho yokusebenza
Ukuzimela, akekho ozokunika amathuluzi okusebenza (Ngaphandle uma inkampani noma umuntu ekwenza, kodwa akuvamile). Ngakho-ke, kuzodingeka utshale imali ukuze uthole konke okudingayo ukuze unikeze isevisi. Futhi lokho kusho ukutshala imali kuwe.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi uyithola kamuva, kodwa ekuqaleni ingabiza.
Mhlawumbe yisimiso sokusebenza ezimele. Ngaphandle kwamakhasimende awukho njengesisebenzi ngoba awukwazi ukusebenza. Kungakho kufanele ubheke abantu noma izinkampani ezifuna ukuqasha izinsiza zakho.
Lokhu akuyona into elula, njengoba kuzomele ubone ukuthi akuphi amakhasimende akho okungenzeka akhona, ubeke inani elifanele laleyo sevisi oyinikezayo, futhi ngaphezu kwakho konke unikeze imiphumela kumakhasimende (njengoba uma ungakwenzi angeke akugcine isikhathi eside. noma).
Ukuthola umsebenzi njenge-freelancer akulula. Siyakuxwayisa ngalokho. Kodwa akwenzeki futhi.
Kuye ngomsebenzi ofuna ukuwunikezela, ungathola ezinye izinkundla onganikela ngazo ngezinsizakalo zakho, ubonise amaphrojekthi noma izibonelo zobuqambi bakho futhi uqashwe.
Ngokwesibonelo, unayo amapulatifomu afana ne-Domestika, i-Freelancer, umsebenzi ozimele, i-Workana ... lapho abaningi becela ochwepheshe bemisebenzi ethile ehlukene. Manje, ungeke nje uhlale nalokho.
Kuhle futhi ukwenza amasu okumaketha okungaxhunyiwe ku-inthanethi nakuma-inthanethi ukuthola amakhasimende ngaphandle kwalezo zinkundla. Noma lokho okubizwa ngokuthi "umnyango obandayo", okungukuthi, ama-imeyili noma ukuvakasha ezinkampanini ezihlinzeka ngezinsizakalo zakho.
Okufanele ukukhumbule wukuthi umsebenzi ungakushiya ubusuku bonke noma uthathe amasonto ukuthi ufike. Ngakho-ke zama ukungalilahli ithemba futhi uqhubeke uzama ngoba, ekugcineni, kukhona okuqhamukayo.
Ingabe isibalo somsebenzi ozimele sesicace kakhudlwana kuwena? Ingabe unokungabaza nganoma yisiphi isici? Sibuze futhi sizozama ukukusiza ukuyiphendula.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Kuyini ukuzimela